Inona no jerena ao Pamplona | Vaovao momba ny dia
Inona no ho hita any Pamplona
Ny renivohitry ny fanjakan'ny Navarre taloha, ny niandohan'ny Pamplona dia niverina tamin'ny taonjato XNUMX talohan'i JK rehefa nanangana ny tanànan'i Pompaelo tamina tanàna nateraka taloha ny Romana. Fantatra manerantany ho an'ny Sanfermines, Pamplona dia tanàna mandray olona izay manana foibe manan-tantara mavitrika feno fivarotana, hetsika ara-kolotsaina ary fijanonana gastronomika handany fotoana mahafinaritra be. Ankoatr'izay, ny toerana misy azy eo afovoany any Navarra dia mety indrindra hahitana toerana hafa mahaliana ao amin'ny faritra. Miaraka aminay amin'ity làlana mankany Pamplona ity ve ianao?
1 Ivon-toerana manan-tantara ao Pamplona
1.1 Rindrin'i Pamplona
1.2 Ny Citadel
1.3 Katedraly Santa María la Real
1.4 Kianja plastika
1.5 Zaridaina Taconera
1.6 Valan-javaboary Yamaguchi
1.7 Museum Navarra
1.8 Fiangonan'i San Cernín
1.9 Fiangonan'i San Nicolás
Ivon-toerana manan-tantara ao Pamplona
Ilay tanàna taloha, antsoina hoe Alde Zaharra any Basque, dia manana rafitry ny trano ambany sy arabe tery. Ao no ahitanao ny ankamaroan'ny vakoka mampiavaka azy.
Ny rindrin'i Pamplona manana halavirana 5 kilometatra, izay manodidina ny ampahany lehibe amin'ny foibe manan-tantara sy ny trano mimanda an'ny Citadel, dia iray amin'ireo notehirizina tsara indrindra tany Eropa. Raha te hahafantatra azy ianao dia afaka mitsangatsangana an-tampony ary koa midina amin'ny tongony hijery ny tena habeny.
Raha vantany vao vita ny fahitana ny rindrina, azonao atao ny manohy amin'ny Citadel, trano mimanda Renaissance eo anelanelan'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX, izay miavaka amin'ny endrika pentagon pentagon misy kintana dimy ary noheverina ho ohatra tsara indrindra amin'ny maritrano miaramila an'ny Renaissance any Espana.
Katedraly Santa María la Real
Fitsidihana iray hafa tena ilaina ao Pamplona ny katedraly Gothic any Santa María la Real, natsangana tamin'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX, na dia teo amin'ny fomba neoklasika aza ny maso. Ao anatiny dia misy firavaka toy ny jirofo (iray amin'ireo tsara indrindra any Eropa tamin'ny taonjato faha-XNUMX), ny sakristy, ny trano fiangonana, ny fivarotana, ny amboarampeo na ny fasan'ny mpanjaka Carlos III an'ny Navarra ary Eleanor of Castile.
Ary koa, raha azonao atao, dia miakara any amin'ny tilikambo avaratra misy ilay lakolosin'i Maria, izay ahitanao ny fahitana ny tanàna iray manontolo.
Rehefa mandao ny katedraly ianao dia mankanesa any amin'ny Plaza de San José, toerana mahafinaritra any Pamplona izay miavaka ny Loharano Dolphin, ilay tokana ihany koa izay fametahana jiro ao an-tanàna.
Ny Plaza del Castillo no ivon'ny fiainana ao Pamplona. Hatramin'ny nananganana azy, ny kianja dia iray amin'ireo sary famantarana malaza eto an-tanàna ary toerana anaovana hetsika manan-danja indrindra. Ity tranokala ity dia voafaritry ny trano maherin'ny taonjato faha-XNUMX sy ny fisotroana bar misy terraces ahafahanao manandrana ny gastronomia Navarran tena tsara.
Ny arabe Estafeta, malaza amin'ny fihazakan'ny omby omby San Fermín, dia toerana iray hafa hankafizana divay tsara sy pinchos isan-karazany. Ny fetibe malaza indrindra dia natao teo anelanelan'ny 6 sy 14 Jolay mba hahatsiarovana ny olo-masina mpiaro an'i Navarra.
Etsy ankilany, raha te-hitsangatsangana any Pamplona ianao ka hisoka rivotra madio dia mankanesa any amin'ny valan-javaboary tranainy indrindra ao amin'ny munisipaly, ny Jardines de la Taconera, izay toerana iva vorombola maro no miaina anaty fahalalahana.
Azonao atao ihany koa ny mankeny amin'ny Yamaguchi Park, zaridaina japoney tsara tarehy iray, 20 minitra fotsiny miala eo afovoany manan-tantara.. Ity zaridaina ity dia teraka noho ny kambana tao Pamplona niaraka tamin'ny tanànan'i Yamaguchi Japoney. Mandehandeha mamaky ny zaridaina ianao dia hahita hazo sy zavamaniry avy any Azia ary koa dobo misy tetezana sy riandrano.
Any akaikin'ny tehezan'i Santo Domingo, ao amin'ny hopitaly taloha any Nuestra Señora de la Misericordia no ahitantsika ny Museum of Navarra. Eto ianao dia afaka mianatra momba ny tantaran'ny Navarra sy mandinika ireo sombin-javatra manan-danja toy ny mozika romana an'ny Triumph of Bacchus tamin'ny taonjato voalohany, ny sarintanin'i Abauntz, ny sarin'ny Marquis of San Adrián nataon'i Goya ary ny Chest of Leyre, a asan'ny kanto Silamo. ankoatry ny hafa.
Fiangonan'i San Cernín
Ny fiangonan'i San Cernin, olo-masina mpiaro ny tanàna, dia tempoly manana endrika gothic nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX izay mampiavaka ny ao anatiny ny fiangonana Baroque lehibe misy azy ary ny ivelany kosa misy ny portico voaravaka sary sokitra tsara tarehy sy ny façade misy azy. tilikambo roa avo.
Fiangonan'i San Nicolás
Izy io dia fiangonana Gothic iray hafa izay manana taova Baroque lehibe, izay iray amin'ireo zava-dehibe indrindra amin'ny fiarahamonina foral.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Inona no ho hita any Pamplona
Ny lakandranon'i Suez